Sheekada filimka Bhoomi: Sanjay Dutt bandhigiisa wacan u daawo filimkaan sheekadiisa dhex dhexaadka ah | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Bhoomi: Sanjay Dutt bandhigiisa wacan u daawo filimkaan sheekadiisa dhex dhexaadka ah
Kadib markii kiiskii kufsiga Nirbhaya uu Hindiya gil gilay sanadii 2012 xili markaas magaalada Delhi gabbar 23-jir arday ah ay gaari bas ku kufsadeen 6-nin!
Hindiya oo dhan arimaha kiisaska kufsiga waa lagu baraarugay wax badana waa laga qabtay halka welina kufsiga Hindiya ka dhaco.
Bollywood-ka kaalintooda ayay ka qaateen dhanka wacyi halinta waxayna sameeyeen aflaan dumarka lagu xad gudbaayo xaqadoodana loo soo dhicinaayo sida Pink, Maatr, Mom iyo kuwo kale.
Hadab soo laabashada Super Star Sanjay Dutt wuxuu doortay mowduucan xasaasiga ah asigoo maanta tiyaatarada loo saaray filimka Bhoomi ee fariinta aar gudasho xambaarsan asigoou aar gudaayo gabadhiisa kufsi loo geesanayo iyo dhibaatada uu maraayo.
Jilaayaasha: Sanjay Dutt, Aditi Rao Hydari, Shekhar Suman, Sharad Kelkar
Arun (Sanjay Dutt) waa carmal kaligiis gabadhiisa soo bar baariyay una horey noloshiisa gabadha uu ifka ugu jecel yahay Bhoomi (Aditi Rao Hydari) waxayna ku wada nool yihiin magaalada Agra.
Neeraj (Sidhant Gupta) oo ah wiil deegaanka kula nool ayaa jecel Bhoomi iyadana wey ka heleysaa sidoo kalena Arjun isagana gabdhiisa uu la jecel yahay wiilka ay dooratay.
Vishal (Puru Chibber) oo isagana daris la ah Bhoomi ayaa jecel balse iyada ma dooneyso wuxuuna maalmo ka hor meherkeeda ku qasbaa inay guurkiisa aqbasho weyna dharbaaxeysaa dadkan wey ku hor ceebeysaneysaa.
Vishal oo careesan wuxuu u tagaa ina adeerkiisa burcadka ah Dhauli (Sharad Kelkar) asigoo u sheegayo inay Bhoomi diiday waxayna u dagayaan shirqool fool xun labadooda iyo kooxdii la socotay ayaa wada kufsanayaan Bhoomi nolosheedana ku cayaarayaan!
Arjun noloshiisa oo dhan wey bur bureysaa isaga iyo gabadhiisa Bhoomi cid caawiso ayuu weynaa xanuun badan kadib waxay isla dagayaan qorshe ay kaga aar gudanayaan kooxdii dhibka u geesatay noloshoodana ku cayaartay.
Maxaa Laga Yiri Sheekada Filimka Bhoomi:
Sheekada Bhoomi ee uu qoray Sandeep Singh ma ahan wax ku cusub Bollywood-ka sidaa darteed Bhoomi labo arin ayaa sheekadiisa dib u dhigayaan in daawadayaasha aqbalaan.
Mida kowaad Bhoomi wuu soo daahay fariin ahaan waayo daawadyaasha sanadkaan waxay daawadeen sedex filim oo fariinta kufisga iyo aar gudashada ka hadlayaan sida KAABIL, MAATR iyo MOM.
Mida labaadna Bhoomi si dhaqsi ah sheekada aar gudashada looma guda galaayo waxaa lagu daahaa murugada iyo jil jileeca hogaamiyaasha filimkaan, kaliya 20-ka daqiiqo ee ugu dambeyso ayaa aar gudashada filimkaan la guda galaa mana ahan falsafad wanaagsan.
Waxaa amaan mudan Raaj Shaandiliyaa oo sameeyay hadalada filimkaan lagu hadlaayo waana waxa ugu weyn ee daawashada Bhoomi kugu xiiso galinaayo madaama hadalo soo jiidasho leh jilaa kasto loo diyaariyay.
Director Omung Kuma sheekada Bhoomi oo mid iska sahlan ahayd si adag uma uusan dhigin wuxuuna ka badiyay rabshada iyo murugada faraha badan.
Laakiin sedex muuqaal ayuu si wacan u sameeyay marka Sanjay gabadhiisa Aditi kabo cusub u keenayo, marka Sanjay Dutt qolka maxkamada kasoo jeedinayo hadalo qiiro badan iyo marka Sanjay Dutt qof dhibane kufsi loo geestay ku wargalinaayo in dunida siyaabo kala duwan loo ciqaabo qofka kufsiga geesto oo aysan caalamka u dagsaneyn hal ciqaab oo la isku raacsan yahay.
Bandhiga Jilaayaasha Filimka Bhoomi: Sanjay Dutt wuu soo laabatay wuxuuna la yimid bandhig lagu amaani karo gaar ahaan sida uu murugada qiirada badan u matalay aabo aan garab heesanin iyo sida uu markii dambe u noqonaayo aabo awood oo aar gudanaayo.
Aditi Rao Hydari waxay la timid bandhig qurux badan sidoo kalena Bhoomi waxay ku muujisay inay tahay atirisho u diyaarsan sameynta doorarka dhibka badan.
Sharad Kelkar waa laadarka ugu doorka wanaagsan filimka Bhoomi doorkiisana waa mid kusoo jiidanayo sidoo kalena Sidhant Gupta doorkiisa muuqaalka martida ah ee uu jaceylka Aditi ku matalaayo waa mid wacan.
Gunaanad: Bhoomi waa filim qiirada laga badiyay sidoo kalena sheeko ahaan si wacan la isugu daba ridin laakiin Sanjay Dutt bandhigiisa weyn ayaa filimkaan kugu qasbaayo inaan hal mar daawatid.
Dhanka Boxoffice-ka Bhoomi si wanaagsan kuma bilaaban doono sidoo kalena waa inuu la tartamaa aflaanta kale ee masraxa la saaray weyna ku adkaan doontaa hal todobaad inuu ganacsi sameeyo madaama todobaadka dambe tiyaatarada la wareegi doono filimka weyn ee la wada sugaayo Judwaa 2.
Dadka filimada ka faaloodaan sheekada filimka Bhoomi waxay siiyeen 2/5 wuxuuna labada dhibcood ku helay Sanjay Dutt bandhigiisa weyn iyo sheekadiisa iska dhex dhexaadka ah.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Bhoomi: